Got Married | Layma's World
Filed under: Personal, That's what I wanna say |
« New House Party A Dancer’s Wish »
မျှားပြာ, on October 28, 2007 at 5:52 pm said:
ဂလိုကိုးးးးးးးးး အဟိ အဟိ … ခွိ ခွိ ခွိ
သစ်ပင်ကို ဒီနေ့မှပဲ မြင်ရတော့တယ်ဗျ … ကောင်းတယ်
စိုးထက် - Soe Htet !, on October 29, 2007 at 2:22 am said:
ဟဲ ဟဲ … သိမှသိပဲ … ဆောရီးနော် … 😛
Tesla, on October 29, 2007 at 5:21 am said:
အဟတ်.. ဂလိုလား.. သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲက မြန်လှချည်လား တို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ မှား.. နင်လားငါလားဟဲ့… ကြွားစရာရှိတဲ့ သူတွေကတော့ ကြွားနိုင်တာပေါ့ဗျား.. ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး အိမ်နဲ့ ကောင်းကင်နဲ့ ဘာနဲ့ ညာနဲ့တဲ့.. ဟင်း ဟင်း….
မယ်လိုဒီမောင်, on October 29, 2007 at 5:34 am said:
ဟွန့် နာတို့ကိုတော့ showroom ထဲမှာ ဖုန်သုတ်နေရတဲ့ ပစ္စည်းတွေလို့ စောင်းပြောသလိုပဲ ဟုတ်ဘူးကွ မရောင်းရသေးတဲ့ ပန်းသီးလေးတွေကွ 😛
ကြွားစရာ ရတနာလေးလဲ အမြန်ရပါစေ လေးမရေ 🙂
Yan, on October 29, 2007 at 6:43 am said:
တစ်ချို့က ဆက်ပြီး မအောင့်နိုင်တော့ဘူး. အမေးကိုစောင့်နေတာလေ. (ဟတ်ဟတ်) ငိုချင်ရက်လက်တို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး. ပြောချင်ရက် သွန်ချ ဖြစ်ကုန်တာ. (ချိတ်ချိုးနဲ့ မခံချင် ပြန်စ… ) ဟဟဟ
သိပ်ချစ်တဲ့ ကောင်းကင်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်.
စာကလေး, on October 29, 2007 at 7:49 am said:
စာကလေး, on October 29, 2007 at 7:53 am said:
Myanmar3 , မြစေတီ နဲ့ ပုရပိုက် ဖောင့်တွေသုံးတဲ့သူတွေလဲ
အမရဲ့ ပိုစ့်တွေကို ဖတ်လို့ရတယ် အမရေ
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Version တွေတော့ဖြစ်ရမယ်လို့
nu-san, on October 29, 2007 at 11:47 am said:
လေးမရေ.. သတိ..ပိုင်ရှင်ရှိသည် ပေါ့.. အခုတော့ သိသွားပြီ။ ဟား…ဟားး…
thamudaya, on October 29, 2007 at 10:40 pm said:
မျက်လုံး, on October 29, 2007 at 11:45 pm said:
လာပြီး ဘာမှ မပြောဖြစ်လို့ပါ။ ဒီပို့စ်က ကြွားတာလား၊ ကောင်းကင်နဲ့ ကွိုင်မှာစိုးလို့ ကြိုရှင်းထားတာလားဟင်။ 🙂
မိုးချစ်သူ, on October 30, 2007 at 9:52 am said:
ကြွားပါရှင်။ ဟင့်….ကြွားစရာမရှိလို့ ငိုပြီးပြန်သွားပြီဗျ။
မမ ရတနာလေးတွေ မြန်မြန်ရပါစေနော်။ ဆုမွန်မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်း
မမနာမည် ပို့စ်ထဲထဲ့ေ၇းတာ ခွင့်ပြုနော်။ ဟီး ရေးပြီးသွားပြီဗျ။
layma, on October 30, 2007 at 12:09 pm said:
ကိုမျှားပြာ…ဂလိုပါရှင်…။ သစ်ပင်က ဟုတ်တယ်… သိပ်နားမလည်လို့ ခုမှ ပြန်ပြင်ရတာ…။
ကိုစိုးထက် … ခုတော့သိသွားပြီ…။
ကိုတက်စ် … မခံချင်ရင် ပြန်ကြွားလေ…။
ဦးရေခဲညှပ် … ရေခဲခြစ်တောင် စားချင်လာပြီ…။မှန်တာပြောတော့ ချိတ်ချိုးတယ်…။ ကဗျာလေးအတွက်ကျေးဇူး..။
မနုစံ … သတိ …ရောင်းချပြီး လို့ မအော်သွားတာတော်သေးတယ်..။
မမသမုဒယ… cbox link ပေးထားတယ်…ထည့်လို့ရဘူး…မမရဲ့..။
ကိုမျက်လုံး … တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့…။ သဘောပေါက်တယ်နော်…။
မိုးချစ်သူ … ကျေးဇူးဆုမွန် ..လေး..။ ငိုနဲ့ တိတ်တိတ်…။
mtj, on October 30, 2007 at 5:11 pm said:
မလေး free wordpress hosting အတွက် pdf လုပ်နေတယ်ဗျ 2-3 ရက်လောက်စောင့်ပါ။ 🙂
Chitlaypyay, on November 1, 2007 at 3:11 am said:
ဟွန့် ပြောအားရှိတော့ ပြောထားအုံးပေါ့ တို့တွေကိုများ ရှိုးရွမ်း ထဲမှာ ဖုန်သုတ်နေရတဲ့ ပစည်းတွေတဲ့၊ စိတ်ဆိုးတယ်၊ ခေါ်တော့ဝူး၊ စိတ်ဆိုးပြေအောင် တက်ထားတာ မြန်မြန် ရေးပေး၊
thinzar, on November 5, 2007 at 1:18 pm said:
hmm.. စာမေးပွဲ တစ်ပါတ်လောက် သွားဖြေလိုက်တာ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲဟင် :0 … Anyway, congrats ma layma!!